****** စဉ်းစားကြည့်ပါ…ပြီးမှ “ မစဉ်းစားပါနဲ့ ”…..တဲ့ **** | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ****** စဉ်းစားကြည့်ပါ…ပြီးမှ “ မစဉ်းစားပါနဲ့ ”…..တဲ့ ****
****** စဉ်းစားကြည့်ပါ…ပြီးမှ “ မစဉ်းစားပါနဲ့ ”…..တဲ့ ****
Posted by မိုးခ်မ္းေျမ႕ on Jul 28, 2012 in Copy/Paste | 11 comments
ကမ္ဘာ့လူသားများအနေနှင့် လူနဲ့လူခြင်း ဆက်ဆံရာတွင် ငြိမ်းချမ်း အေးမြသော လူမှု ဆက်ဆံရေးကိုသာလိုလားကြသည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး လူနဲ့လူခြင်းဆက်ဆံရာတွင် ဘာသာတရားများမှပို့ ပို့ချသော အဆုံးအမများကိုသာ ခံယူကျင့်သုံးနေကြသည်မှာလည်း လက်ရှိနိုင်ငံတိုင်းမှာ ပင်တွေ့နေရသည်။
ဤနေရာတွင် ဘာသာတရားများ၏ အဆုံးအမသွန်သင်မှုများ၏ အကျိုးအာနိသင်သည် လက်ရှိလူသားတို့ မမြင်နိုင်၊ မတွေ့နိုင်၊ မကြားနိုင်၊ မသိနိုင်သော နေရာဌာနများကို ညွှန် ပြလျက်ရှိသည်မှာ ဘာသာတိုင်းလိုလိုပင်ဖြစ်နေပါသည်။
ဥပမာ…….ယခုပြုလုပ်သော အမှုကြောင့်….တမန်တော်၏ ချီးမြှောက်မှုကို ရရှိ၍၊ တမန် တော်မကြိုက်တာကိုလုပ်၍ ငရဲသို့သွားရခြင်း။ ဤသို့သောအမှုကို ပြုမိခြင်းကြောင့် သခင်ယေရှုက ကောင်းချီးပေး၍၊ ထိုမကောင်းမှုကြောင့် နောက်ဘဝတွင် ဘာမျှမဖြစ် တော့သော တွင်းနက်ကြီးထဲသို့ ကျရောက်မည်ဟု ဆိုကြခြင်း။ ကောင်းမှုပြုပါက ဤဘ ဝတွင် ကောင်းကျိုးမခံစားရစေကာမူ၊ နောင်ဘဝအဆက်ဆက်တွင် သေခြာပေါက် ကောင်းကျိုးကို ခံစားရမည်၊ မကောင်းမှုပြုပါကလည်း ယခုဘဝမှာ ကောင်းစားနေပေ မယ့် နောက်ဘဝရောက်လျှင် အမှန်တကယ် ငရဲကျ၍ ဆင်းရဲစွာခံစားရလိမ့်မည်ဟု မြတ်စွာဘုရားသခင်က ဟောတော်မူခြင်း။
ထိုကဲ့သို့ပင် ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားများကလည်းပြော၊ ဂျိမ်းဆရာတွေကလည်းပြော၊ တိဘက် ဒလိုင်းလားမားဘုန်းတော်ကြီးတွေကလည်းပြော………
စသည်ဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိဘာသာများမှ ပြောဆိုဆုံးမသွန်သင်နေသော နောက်ဘဝဟူ သည့်အကြောင်းတရားများသည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် လုံးဝကို မစဉ်းစားသင့်သော အယူအဆများဖြစ်သည်ဟု ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင်ကပြောသွားသည်ဟု လေ့လာ မိသောအခါ၊ လူတို့သည် ဘာ့ကြောင့် သေပြီးသည့်နောက်ဘဝအယူများကို တွေးတော နေကြပါသလဲဟု မေးရမလိုဖြစ်လာသည်။
ထိုသေပြီးသည့်နောက် ဘဝတွေရဲ့အကြောင်းကို ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်က ဒါတွေကိုမစဉ်းစားသင့်ကြောင်း ဟောကြားထားပါလျက် မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောညွှန်ပြ၊ သွန်သင်လျက်ရှိသော ဆရာဖြစ်သူပုဂ္ဂိုလ်များက ဘာ့ကြောင့် မပြောသလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။
စဉ်းစားသင့်သောအရာဖြစ်လျှင်လည်း မမေ့မလျော့၊ မပေါ့မဆ ပဲ၊ မှန်ကန်စွာတွေးခေါ် နိုင်စေခြင်းငှာ……ဘုရားဟောထားသော…စကားတချို့ကို ထုတ်နှုတ်တင်ပြလိုက်ရပါ သည်။
“ စိန္တသုတ် ”
ရဟန်းတို့ လောကသည် “ မြဲ၏’’ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ လောကသည် “မ မြဲ ”ဟူ၍ လည်ကောင်း၊ လောကသည် “ အဆုံးရှိ၏ ’’ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ လောက သည် “ အ ဆုံးမရှိ ’’ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “ ထိုအသက်သည်ပင် ထိုကိုယ်ဖြစ်၏ ” ဟူ၍လည်း ကောင်း၊ “အသက်သည် တစ်ခြား၊ ကိုယ်သည်တစ်ခြား” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “သတ္တ ဝါသည် သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ ” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “ သတ္တဝါသည် သေပြီး သည်မှ နောက်၌ မဖြစ် ”ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “သတ္တဝါသည် သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်း ဖြစ်၊ မဖြစ်လည်းမဖြစ် ” ဟူ ၍ လည်းကောင်း၊ “သတ္တဝါသည် သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် ”ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဤသို့ ယုတ်ညံ့ သော အကုသိုလ် စိတ်ကို မကြံစည်ကုန်ရာ။
ထိုသို့ မကြံစည်သင့်ခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့်နည်း။
ရဟန်းတို့ ဤအကြံအစည်သည် အကျိုးစီးပွားနှင့်မစပ်၊ မဂ်တည်းဟူသော အကျင့်မြတ်၏ အစမဟုတ်၊ ငြီးငွေ့ရန်၊ တပ်ခြင်းကင်းရန်၊ ချုပ်ရန်၊ ငြိမ်းအေးရန်၊ ထူး သော ဉာဏ်ဖြင့်သိရန်၊ ကိုယ်တိုင်သိရန်၊ တဏှာမှ ထွက်မြောက်ရန် မဖြစ်။
ရဟန်းတို့ သင်တို့သည် ကြံစည်လိုကြကုန်သော် “ ဤကား ဆင်းရဲတည်း ” ဟု ကြံစည်ကုန်ရာ၏၊ “ ဤကား ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတည်း ”ဟု ကြံစည်ကုန်ရာ၏၊ “ ဤ ကား ဆင်းရဲချုပ်ရာ (နိဗ္ဗာန်) တည်း ”ဟု ကြံစည်ကုန်ရာ၏၊ “ ဤကား ဆင်းရဲချုပ်ရာ (နိဗ္ဗာန်) သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်တည်း ”ဟု ကြံစည်ကုန်ရာ၏။
ထိုသို့ ကြံစည်သင့်ခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့်နည်း။
ရဟန်းတို့ ဤအကြံအစည်သည် အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်၏၊ မဂ်တည်းဟူသော အ ကျင့်မြတ်၏ အစဖြစ်၏၊ ငြီးငွေ့ရန်၊ တပ်ခြင်းကင်းရန်၊ ချုပ်ရန်၊ ငြိမ်းရန်၊ ထူးသောဉာဏ် ဖြင့်သိရန်၊ ကိုယ်တိုင်သိရန်၊ တဏှာမှ ထွက်မြောက်ရန်ဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် “ ဤကား ဆင်းရဲတည်း ” ဟုသိရန် အားထုတ်ရမည်(ပ)။ “ဤကား ဆင်းရဲချုပ်ရာ(နိဗ္ဗာန်)ရောက်ကြောင်း အကျင့်တည်း” ဟု သိရန် အားထုတ် ရမည်ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
အကိုရေ လူသားမှန်ရင်တော့ တဏှာစွဲတော့ ကင်းနိုင်မည်မထင်ပါနော့်။
လူသားမှန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်တဏှာစွဲ ကင်းနိုင်ပါ့မလဲ့ပေါ့….
လွတ်အောင်ဖောက်ထွက်ခဲ့တာကိုတော့ နမူနာယူပြီး ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်…..
ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလူသားတွေလည်း တဏှာစွဲတော့ ကင်းနိုင်မှာပေါ့….နော့်။
လူသားဟာ သေပြီးဘာဖြစ်မည်ကိုမစဉ်းစားလို့ဘယ်လို့အမှန်တရားကိုတွေပါမည်လဲ၊သေသေချာချာ လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါအုံး၊ဥပမာခင်ဗျားသိအောင်ပြောပြလိုက်ပါမယ်စက်ရုပ်တစ်ခုကိုစက်ရုပ်တီထွင်သူကတီထွင်ပြီး နောက် အဆိုပါ စက်ရုပ်ကိုဘဲခင်ဗျားကြည့်ပြီးဒါဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်၊ဘယ်ကိုသွားမယ်၊ဘာလုပ်
မယ်၊ဘယ်သူတီထွင်ထားတာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲကိုစဉ်းစားတွေးတောနိုင်မှ အမှန်တရားကိုသိတော့မပေါ့။
မဟုတ်ရင်တစ်ယောက်ဟာ စက်ရုပ်တစ်ရုပ် ဘက္ထရီထည့်ပြီးလွတ်ထားသလို့ သွားချင်တာသွားရောက်
ချင်တာရောက်၊ ဝင်တိုက်ချင်တိုက်၊ပြီးဘက္ထရီကုန်လဲကျ ဒါဘဝမှမဟုတ်တာ၊
ဒီလို့ဘဲလူသားဟာဘယ်လောက်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခံထားရတာလဲ၊ တစ်မိနစ်ရပ်တည်ဖိုဘယ်အရာတွေဘယ်လောက် အလုပ်လုပ်နေရတာလဲဘယ်သူလုပ်ထားတာလဲ၊ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ထားတာလဲ၊ရည်ရွယ်ချက် ဘာလဲ၊ဘယ်လောက်သက်တမ်းနေရမှာလဲ ဒါတွေကို အမှန်စဉ်းစားကြည့်ရမှာပါ။
ကိုူယ်အမေလုပ်ထားလား၊ကိုယ်ကိုတိုင်လုပ်တာလား၊ ကိုယ်ကိုတိုင်လုပ်ပါတယ်လို ့အော်နေတဲ့ပါစပ်ကကော
ဘယ်သူ ဖေါက်ထားတာလဲ၊ငါဘာများလုပ်နိုင်သလဲ၊ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ် မှကိုယ်ကိုတိုင်လုပ်မှ ရှင်သန်ရမယ်
ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တာဘာရှိလဲ သေသေချာချာလေ့လာပါ။
ကိုယ်ကုသိုလ်လုပ်တာလား၊ကံတရားဆိုတာလုပ်တာလား၊ ကံတရားဆိုတာဘာလဲ၊ဒါတွေလေ့လာမှအမှန်တရားကိုခင်ဗျားတို့တွေရမှာပေါ့ ၊ပြီးတော့ဒီလိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေပြီးဘယ်ရောက် သွားလဲဒါကိုလဲသေသေချာချာလေ့လာမှပေါ့၊ ဒီမှအိမ်တစ်လုံး ပြီးတော့ဒီမှာအိမ်တစ်လုံးဒီအိမ်ကပြီးဒီရောက်သွားတယ် ဆိုတာကလေးတွေကို ပြောတောင်မယုံ ြကြည့်ကြပါဘူး၊ဒီအိမ်ဘယ်သူဆောက်ထားတာလဲ ဒီအိမ်ကနေနောက်အိမ်ကိ်ုဘာနဲ့သွားမှာလဲ ဆိုတာကလေးကအစမေးမှာပါဘဲ
ဒီဖယောင်းတိုင်ကုန်တော့ နောက်ဖယောင်တိုင်ဆက်ပြီးမီးကူးပြီးထွန်းတယ်၊ ဒါကိုခင်ဗျားကဘေးကကြည့်
ပြီး ဒီဖယောင်းတိုင်ကမီးနောက် ဖယောင်းတိုင်မီးကူးတာလောက်ဘဲမြင်လို့လဲရတယ်၊
ဒါအကုန်မြင်တာမဟုတ်ဘူး၊ကလေးလို့မြင်တာ၊ ဖယောင်းတိုင်မီးလောင်နေတယ်မီးလောင်နေတယ်လို့မြင်ရုံနဲ့မပြီးဘူး၊ လူကြီးကတော့ ဘယ်လိုူ့မြင်ရမလဲဆိုတော့၊ ဒီဖယောင်းတိုင် ဘယ်သူ
လုပ်တာကအစ၊ ယှဉ်ပြီးစိုက်တာကအစ၊မီးညိတာက အစ၊ပြီးတော့ဒီဖယောင်းတိုင်မီးစာကုန်တော့
ဘယ်သူကမီးကို နောက်တစ်တိုင်ကိုကူးပြီးထွန်ညှိတာကအစ မြင်တတ်ရမယ်၊ ဒါမှအမှန်တရားကိုမြင်မှာပါ။
ဒါကိုမျက်မှောက်ပြုထားဆိုလို့ အမှန်တရားကိုဘယ်ရောက်တော့ မတုန်း၊ဉာဏ်ဆိုတာဖွင့်ထားရတာ၊
စဉ်းစားရတာ ၊တွေးခေါ်တတ်ဖို့ထည့်ပေးထားတာ၊ မသိလို့မရဘူး၊ သဗ္ဗုညုတဆိုတာ ဒါလဲသိရမှာဘဲ
အလုံးစုံကို သိတယ်ဆိုတာကိုး၊ဒါကို မှ မသိဘူးဆိုရင်တော့ အလုံးစုံကို မသိခဲ့လို့ပါဘဲ၊သေသေချာချာ
လေ့လာကြပါ၊ မျက်စိရှေမှာ သက်သေတွေအများကြီးပါဘဲ၊ အချိန်အခါလွန်သွားမှာ ငါမတွေ့မမြင်လိုက်
ခြင်း၊မတွေးတောတတ်လိုက်တာ၊ တုံးလိုက်တာ လိုပြောနေလို့မရပါဘူး၊ ကမ္ဘဂြိုလ်ပေါ်မှာလူသားတွေ
နေတာဘယ်လို့ နေရာမှာနေရတာကိုသိရင်ပိုအံဩပါလိမ်မယ်၊ မျက်စီမှိတ် မယုံကြည့်ကြဖို လမ်းညွန်
ထားတာတွေအများကြီင်္းပါ၊ အမှန်တရားကို ရှာဖွေပါ၊မျက်မှောက်ပြုမထားကြပါနဲ့
ဆောင်းပါသီးသန့်ရေးပါအုံးမည် .. .
…” ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာ” ကိုလက်ခံနှစ်သက်.. လိုက်နာရေးမယ့်. ဆောင်းပါးဆိုကြိုဆိုပါတယ်..
အခုပဲ.. CNN ကြည့်နေတာ…
အော်ရိုရာ..ကော်ရိုရာဒိုမှာလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် သေနတ်နဲ့သတ်ခံရတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. GOD ရပ်တည်မှုကို မေးခွန်းထုတ်နေကြလေရဲ့…
အဲဒီထဲက.. ရှေးဂရိဖီလောဆော်ဖာတဦးရဲ့.. စာလေး..တင်ပေးလိုက်ပါရစေ..
Ancient Greek philosopher (and skeptic) Epicurus
အမှန်မှာတော့ သဂျီးရယ် လူဖြူဆိုတဲ့အကောင်တွေက ရိုက်မှသိ ထိမှနာတတ်ကြတာပါ။ ရာစုနှစ်နဲ့ချီ ကောင်းနေကောင်းကောင်းစား (ဒါလည်း လုပ်သမျှဖြစ်နေခဲ့တာကိုး) လာခဲ့တော့ မသေချာ မရေရာမှုဆိုတာ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားရကောင်းမှန်း မသိဘူးပေါ့။ ကွန်ဆားဗေးတစ် အများစုအဖို့ ငါတို့ကောင်းလို့ ဘုရားစောင့်ရှောက်တယ် မှတ်တယ်။ သူများတွေနာရင် အသုံးမကျလို့ဖြစ်တာ ငါတို့အလှည့်ရှိမှာမဟုတ် ထင်တယ်။ ၉-၁၁ အရေးအခင်းလည်း ဒီလိုပဲ၊ ကမာ္ဘအနှံ့မှာ အကြမ်းဖက်မှု အန္တရာယ် ကြီးကြီးမားမား ကြုံတွေ့နေချိန်မှာ အမေရိကန်ပြည်တွင်းမှာ ပျော်လို့မော်လို့ကောင်းတုန်း၊ ဖြစ်လာတော့ ဘုရားဘယ်ရောက်နေလည်း အဖြေရှာ မရဖြစ်တယ်။ ခရစ်ယာန် ခေါင်းခြောက်နေချိန်မှာ မွတ်စလင်က ဘုရားကူညီလို့ အောင်မြင်တာလို့ ဝါဒဖြန့်တယ်။ ရယ်စရာဂျီး….။
အိန္ဒိယက ခနဲ့တယ်၊ အစွန်းရောက်တွေဒဏ် သူတို့ခံနေရတာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီနေပြီ၊ အမေရိကန်က တိုက်ရိုက်ထိမှ နာရကောင်းမှန်း သိတယ်လို့။
သဘာဝကပ်ဘေးတွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ၊ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်နေတုန်းတော့ ကွန်ဆာဗေးတစ်က ဘုရားတန်ခိုးတော် ချီးမွှမ်းခန်းဖွင့်၊ လစ်ဘရယ်က သိပ္ပံပညာအားကိုးနဲ့ လက်မထောင်၊ မရှုနိုင်မကယ်နိုင် ဖြစ်တဲ့တနေ့ အခုလိုပဲ မေးခွန်းထုတ်လာလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကွန်ဆားဗေးတစ်က လစ်ဘရယ်ကို ပေါက်ကရလုပ်လို့ လူတွေရိုင်းကုန် ကြမ်းကုန်တယ် အပြစ်ဖို့မယ်၊ လစ်ဘရယ်က ကွန်ဆားဗေးတစ် ယုံကြည်မှုကို သုံးမရလို့ ပြန်ပြောမယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ၂၀၁၂ကုန်ရင် ကမာ္ဘပျက်ရမှာပဲ…..။ မယုံမရှိနဲ့နော်သဂျီး ကုသိုလ်ကောင်းမှု ကြိုးစားပြုလော့ (မသေခင်)။ ကြောင်ကြီးကို လုပ်ကျွေးပါ သေမှမငိုနှင့်…။ :cool:
ဟုတ်တယ်…mike tee ပြောသလိုပါပဲ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အရင်က အရာတော်တော်များများကို
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ငြိမ်းချမ်းစေမယ့် တရားဆိုတာမျိုးကို ရှာတဲ့အခါ
စစ်မှန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ တွေ့လာရတာရှိတာမို့
လွတ်လပ်တဲ့ တွေးခေါ်မြှော်မြင်ရသဘာဝကျတဲ့ အချက်ဖြစ်ပေမယ့်
မဖြစ်နိုင်တဲ့ စဉ်းစားမှုမျိုးတွေဆိုရင် မစဉ်းစားမိတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့
ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကို တွေ့မိလို့ တင်ပြလိုက်မိခြင်းပါ။
နေနေရတဲ့ အရေးတွေကို စဉ်းစားနေရတာတောင် မအားရတဲ့ ကြားထဲ . . .
ဘုရားကလည်း မစဉ်းစားပါနဲ့လို့ပြောထားတဲ့ ကြားက
ဒီ သေပြီးနောက်ကို ရေးကြီးခွင်ကျယ်နဲ့ စဉ်းစားခိုင်သူတွေနဲ့ စဉ်းစားနေကြ၊ ပြောဟောနေကြသူ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ” အ -ူး” တွေပဲလို့ . . . ။ ဟင်း . . .။
အညွှန်းး– = ရ
ဟတားတားက ဗမာ ဗုဒ`ဓအစစ်နော် ရတနာ၃ပါးကိုယုံကြည်တယ်(အကြွင်းမဲ့) ကိုမိုးတိမ်ပြောပုံအရဆို သူကြီးတောင် …… ဂွတ်ဂွတ်ဂွတ်
god နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောင်းလဲလာတဲ့ ကိုးကွယ်အားထားမှုတွေကို super natural ဇါတ်ကားတွဲက ဖော်ပြနေသလိုပါဘဲ
god နဲ့ပတ်သက် ဆွေးနွေးသူများသည် အလွန့်အလွန် သာလွန်ပြီးမြောက်သော
သူများသာလျှင် ဖြစ်ပေချိမ့် …။